Ny haavom-pampianarana maoderina amin'ny artikla manerantany dia midika fa maro karazana fitaovam-pisiana ampiasaina no ampiasaina. Amidy dia karazana vilany, karazana vilany, kazans, tsy lazaina intsony ny fitaovana lehibe ho an'ny sakafo. Ny fanaovana ny sakafo dia azo atao amin'ny fomba samihafa - amin'ny giro na angovo elektrika, ao anaty lafaoro ary eny amin'ny afo misokatra aza. Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ny fitaovana mahaliana toy ny toeram-ponenana.
Afokasoka afo - ireo singa sy tombontsoa
Toeram-pisakafoanana izany, izay azo alaina ao amin'ny trano fisakafoanana sy any an-tokotanin'ny tranon'ny firenena iray. Ny kitay mahazatra karazana dia miasa amin'ny hazo sarobidy ary azo ampiasaina amin'ny fomba maro: toy ny barazy, gilasy na oven. Ny fitsipika momba ny fiasan'ny menaka fanosotra dia mifototra amin'ny tsindry mihodinkodina: misy ny tsipiky ny rivotra ao amin'ny faran'ny fitaovana, ary ny fanokafana ny fivoahana ny setroka amin'ny ampahany. Noho io oven io dia azo ampiasaina na amin'ny toerana voafefy, dia tsy misy loto tsara. Ity fitaovana ity dia mampahatsiahy amin'ny antsipirihan'ny "otely" oven, armeniana tandoor na rovina rozea malaza, nefa manana ny tombony tsy azo lavina. Ireto misy ireto manaraka ireto:
Ny sakafom-bovoka rehetra ao anaty lafaona dia "ho setroka". Ity tsiro sy fofona miavaka ity dia manome akanjo manokana ho an'ny lovia rehetra voaomana ao amin'ny oven;
Ny fotoana fitsaboana hafanana vokatra vokarina ao anaty fatana dia ho ambany noho ny rehefa mahandro ao anaty menaka na ao anaty lafaoro. Izany dia tanteraky ny hafanana ambony;
Ny modely sasany dia misy trano fandroana ary mamela azy ireo tsy hanamboatra kebab sy barba avy amin'ny hena, legioma na trondro, fa koa ny sakafo mahavoky azy manokana;
Ny fahafahana mikarakara mofomamy dia iray amin'ireo lozika izay manavaka ny mofomamy avy amin'ny barazy efa mahazatra.
Ny modely sasany amin'ny fatana dia tsy miasa amin'ny hazo, fa amin'ny charcoal. Ny fitaovana ao amin'ny lafaoro ihany koa dia mety tsy mitovy - populaire dia barbecue brick-and-steel sy black-steel. Ny sakafo ihany koa dia atolotra amin'ny sakafo manokana, satria tsy ny fitaovana entin-kilaovina rehetra dia azo ampiasaina amin'ny afo misokatra.
Ny iray fanampiny amin'ny barazy fandroana dia ny fahafahana hanorina azy io. Io dia hamonjy amin'ny kitay novidina amin'ny fitrandrahana ivelan'ny trano ary hanamboatra ny toerana fialan-tsasatry ny tranokalanao amin'ny dikan-teny mahaliana ao amin'ny gilasy. Azo atao tsara ny mijery sary vetaveta, fa mila mandany fotoana kely fotsiny ianao.
Mangsa ho an'ny dacha manokana
Ny mpanao asa tanana sasany dia manao kitapo amin'ny tanany. Inona no ilaina amin'izany? Voalohany, misafidy ny toerana mety - manakaiky ny lakozia ary lavitra ny toerana maitso. Ankoatra izany, tsara kokoa ny mametraka ny oven amin'ny fomba toy izany amin'ny fikorianan'ny rivotra. Koa satria efa miorina tsara ilay zava-mitranga, dia tsy maintsy dinihina mialoha avokoa ireo fotoana rehetra ireo, mba tsy hamerenana indray ny asa.
Voalohany eo ambanin'ny lafaoro no ilainao ny manangana ny fototra, eo no mamelatra ny voalohan'ny rindrina. Avy eo, amin'ny toerana avo mahazatra, manana takelajoro izay hanamboarana sakafo, ary varavarana iray ho an'ny oven, izay azo havaozina na rakotra. Tsara ny mametraka sodina rano ao amin'ny rindrin'ny fatana, ary amin'ny fanamboarana ny tenany, hametraka ranom-boasary, mba hahafahan'ny mahazatra mahomby kokoa, ary tsy ilaina ny miala amin'ny barazy ho an'ny lakozia.
Avy eo dia tonga ny dingana faharoa, izay ahitana ny rindrin'ny fatana sy ny lafaoro. Matetika no misy rindrina vita amin'ny rindrina ny birao, ary izy ireo ihany no manao asa-manga sy etetika. Zava-dehibe kokoa ny manomana tsara ny lafaoro. Ny tapany anatiny dia tsy maintsy anaovana biriky matanjaka, ary ny fanorenana dia apetraka araka ny tetikasa manokana.
Ahoana ny fampiasana fax?
Tsy mamadika ny tablette - inona no tokony hatao?
Ahoana ny fomba fampiasa vy?
Tezitra ve i Teflon?
Minitractor avy amin'ny motoblock
Aiza no hametrahana milina fanasan-damba taloha?
Toe-tsaina tsy misy antony
Mena ho an'ny tarehy
Lazarev dia asabotsy - inona no tsy vita?
Ampahany amin'ny trondro trondro
Ny fitsaboana ny osteoporose amin'ny vehivavy
Dresses Cocktail Trendy 2014
Inona ny talentan'ny ankizy?
T-shirt miaraka amin'ny vorondolo
Tontolon'ny lohataona Tabakon
Tsy manangom-drano ny milina fanasana
Herisetra fanangonam-bokatra Guerlain 2016
Pisces sy Gemini - Fifandraisana amin'ny fiainana sy fitiavana
Kendall Jenner nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Harper's Bazaar: "Ny rahavaviko dia voafetra eo amin'ny ivelany"
Eco Slim noho ny fahaverezan'ny lanjany
Nahoana ny lehilahy no manomboka tia tena - ny psykolojian'ny lehilahy manambady